Zoho CRM | Myanmar Academy - Online Education, Learning, Courses, Platform
Beginner 5(3 Ratings)9Students enrolled
Created by Zoho Myanmar Last updated Sat, 27-Jun-2020 English
41 Lessons 09:22:08 Hours
2 Lessons 00:39:32 Hours
Getting started with Zoho CRM 00:34:30
6 Lessons 00:54:58 Hours
Assignment Rules 00:04:55
Approval Process 00:09:35
Scoring Rules 00:06:17
Validation Rules 00:05:47
Using CRM for Optimal Multichannel Lead Management 00:19:26
6 Lessons 00:38:24 Hours
Page Layouts 00:07:20
Conditional Layouts 00:05:30
Interlinking Modules 00:05:17
Email templates 00:06:20
Homepage Customization 00:07:34
2 Lessons 00:17:25 Hours
Profiles and Roles 00:08:32
User Management 00:08:53
3 Lessons 00:18:56 Hours
Data Migration 00:08:25
Data Import 00:06:51
Data Backup 00:03:40
2 Lessons 00:15:32 Hours
GDPR Overview 00:07:35
Handling Data Processing Bases 00:10:00
Managing Data Subject Rights and Data Security 00:06:25
4 Lessons 00:26:22 Hours
Web Forms 00:06:51
Business Hours 00:05:23
12 Lessons 05:26:59 Hours
Getting Started with CRM 00:23:48
Software Should Fit Your Business—Not the Other Way Around 00:46:40
Automation to Improve Sales Productivity 00:38:51
Selling With Zia 00:18:11
Build Your Sales Path to Move Deals Forward Using Blueprint 00:24:15
Integrate Your CRM With GSuite and Office 365 00:23:40
Sell Better With Marketing and Support Systems Integrations 00:24:39
Email Integration with CRM & SalesInbox 00:22:54
Know the Customer Before you Pick Up: Integrating Telephony Into Your CRM 00:09:45
Advanced Customization: Molding Software to Your Business Needs 00:36:06
Reporting in CRM 00:29:41
CRM Best Practices 00:28:29
What do you know about Zoho CRM 00:00:00
Zoho CRM သည်သင်၏ အွန်လိုင်းအရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် စနစ်တစ်ခုကို တစ်ခုတည်း ထောက်ပံ့ရန်အတွက် online Customer Relationship Management (CRM) ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ Zoho CRM သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ မှစီးပွားရေး ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ကို ဦး ဆောင်သူများကို ပိုမိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကို ကမ္ဘာ့အကြိုက်ဆုံးဖောက်သည်များကြား ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ပြောင်းလဲပါ။
သင်၏ဖောက်သည်များ သူတို့မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဆက်သွယ်ပါ။
တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းနှင့် လူမှုမီဒီယာများဖြစ်သော လိုင်းတိုင်းမှဖောက်သည်များအား ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် ဖောက်သည်များအပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တပြေးညီအသိပေးချက်များရယူပါ။
သင်၏ဖောက်သည် ဆက်သွယ်မှု၏ ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာ။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့် ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့် လမ်းကြောင်းရှာပါ။
သင့်လုပ်ငန်း၏ ရှုထောင့်တိုင်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ပါ။
သင်၏ ဦးဆောင်ပြုစု ပျိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး ဝင်လာသော အခွင့်အရေးများကိုအပြည့်အဝ အသုံးချပါ။
ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို အစပျိုးပါ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၏ ထိပ်တွင်နေပါ၊
Myo Thiha Naing
Zoho CRM isahighly capable customer management software. It offers tons of tools for collecting leads and castsawide net that includes social media platforms. Automated workflows supplemented by AI are very useful for boosting the productivity of your salespeople.
Thet Kyaw Linn
09:22:08 Hours On demand videos
Course preview:Zoho CRM